Somaliland: Hala sameeyo dowlad KMG - BBC Somali
Somaliland: Hala sameeyo dowlad KMG
Image caption Mucaaradka Somaliland
Magaalada Hargeysa hotel Ambassador waxaa maanta shir jaraa'id wadajir ugu qabtay gudoomiyaasha labada xisbi ee mucaaradka Somaliland ee Waddani iyo UCID Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro iyo Faysal Cali Waraabe.
Waxaa kaloo shirka jaraa'id la qabtay labada xisbi kooxda la baxday madasha wada tashiga iyo toosinta dawladda ee mucaaradka ah oo uu u hadlay afhayeenka kooxdaasi Ibraahim Cabdillahi Xuseen.
Waxay mucaaradka Somaliland wadajir ugu dhawaaqeen in dawlad ku meel gaar ah la sameeyo 31 December 2014, hadii xukuumadu qaban weydo doorashadii madaxtooyada ee qorshuhu ahaa in la qabto June 2015.
Waxay ku eedeeyeen xukuumada inaanay dooneyn in la qabto doorashadaasi oo ay rabto in loo kordhiyo mudada xilkeeda oo ku eg 26 june 2014.
Go'aamo kale oo ay soo saareen mucaaradku waxay ku sheegeen in lama huraan ay tahay in xukuumada mudadaasi ka hor ay diiwaan gelintii codbixiyaasha qabato, inay lama huraan tahay in gudiga doorashooyinka laga heshiiyo, oo waqtigii xilkeedu ku egyahay dhammaadka bisha August 2014.
Waxay kaloo doonayaan in si siman saddexda xisbi u qaybsadaan xubnaha gudiga doorashooyinka.
Gudoomiyaasha labada xisbi ee mucaaridka ah UCID iyo Wadani Feysal Cali Waraabe, Cabdiraxmaan Cirro iyo afhayeenka kooxda mucaaradka ee madasha wadatashiga, waxay ku eedeeyeen xukuumada inay ka caga jiideyso in doorasho xalaal ah ay waqtigeedii ku qabato.
Waxay ku hanjabeen inaanay oggolaan doonin marka xilka xukuumadu dhammaato in madaweynaha iyo baarlamaankuba sii fadhiyaan meesha oo ay tahay in laga tashado sidii dawlad ku meel gaar ah oo doorashooyinka gaarsiisa loo sameyn lahaa.
Kooxda madasha wadatashiga iyo toosinta dawlada la baxday waxaa xubno ka ah rag caan ah oo badi ka tirsanaa jabhadii SNM, sida madaxweyne xigeenkii u horreeyay ee Somaliland Xasan Ciise Jaamac.
Waxaa kaloo ku jira wasiirkii hore ee maaliyadda ee xukuumada Axmed Siilaano Maxamed Xaashi Cilmi, Xasan Guure, Cabdiraxmaan Cabdilqaadir, gudoomiye ku xigeenkii hore ee xisbiga Kulmiye, iyo xubno kale oo gidi maanta joogay shirkan jaraa'id iyo madax badan oo xisbiyada mucaaridka ah.